M/weyne Deni oo ka hadlay halka uu ku dambeeyey Mashruucii Wadada Gaalkacyo Iyo Magaalada. – Kismaayo24 News Agency
by admin 22nd March 2020 079
Madaxweyne Deni ayaa sheegay in ay kala hadleen Midowga Yurub, gaar ahaana dawladda Jarmalka sidii dib lacagta mashruuca oo la xanibay loogu fasixi lahaa, isagoo sheegay in uu la kulmay madax kala duwan oo kasocota Jarmalka oo ay arrimahaas ka wada hadleen.
Mr, Deni ayaa cadeeyey in hadda mar kale loo tartami doono Mashruucan oo ay dhawaan Midowga Yurub, gaar ahaana Jarmalka fasixi doonaan, isagoo intaasi ku daray in la dhameeyey dhammaan caqabadihii ku horgudbanaa oo uu sheegay in ay xal ka gaareen.
Madaxweynuhu ma sheegin goor toos ah oo la dhajinayo Tartanka Qandaraaska iyo saameynta ka dhalan doonta, balse wuxuu sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo in wadadaas dib loo hagaajiyo, taas oo muhiim u ah isku socodka dhammaan dalka Soomaaliya & Gobalada Waqooyi Barri (Puntland).
Mashruuca dhismaha wadada Gaalkacyo & Garoowe ayaa kamid ahaa mashaariicdii ay heshay Xukuumaddii Cabdiweli Gaas, balse eedeymo waa weyn oo la xariira habka loo maamulay ayaa kalifay in uu fashilmo, oo ay dawladda Jarmalka ku dhawaaqday in ay la laabatay lacagtii ay ugu talogashay, taas oo ka dhalatay markii ay sheegtay in aan si hufan waxba loo fulin.
Wadadan oo dherarkedu ka badan yahay 250KM ayaa muhiimad weyn ugu fadhida Soomaaliya oo dhan, waxaana dibu dayactir weyn ugu dambeysay markii ay burburtay dawladdii Dhexe ee Soomaaliya, iyadoo xiligaas wadado ahayd mid cusub oo ay markaas xariga ka jartay Xukuumaddii Kacaanka.
TOP NEWS: Qaraxii shalay ka dhacay Muqdisho oo Caalamka ay Siyaabo kala duwan uga hadleen
TOP NEWS: Dhageyso Maxaadan Ogeyn oo Guddiga Doorashooyinka uu ka yiri Xubnaha Aqalka sare ee Lasoo Gudbiyay??? Wareysi Xasaasi ah ayaan Idin kaga heynaa
Amin Camir oo sawir ku cabiray cida Somalia la dagtay…